खुकुलो भयो निषेधाज्ञाः के गर्ने, के नगर्ने ? यस्तो छ डा.रवीन्द्र पाण्डेको सुझाव - हाम्रो देश
काठमाडौं उपत्याकामा भोलिदेखि लागु हुने गरि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय आम जनताको पक्षमा भएको डा. रवीन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ । उनले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्छ कि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको कोरोना संक्रमण घटेर होइन । आम जनतालाई आर्थिक, सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक भार परेको कारण निषेधाज्ञा खुकुलो भएको हो । सरकारले बल हाम्रो हातमा दिएको छ ।’